Wararka - Aqoonta aasaasiga ah ee daaweynta kulaylka birta
Saxnaanta QY waxay dhamaystiri kartaa dhammaan Nidaamka CNC, oo ay ku jiraan Daaweynta kulaylka .
Daawaynta kulaylka birta waa hab ay birta birta ah u kululaato heerkul ku habboon meel dhexaad gaar ah, ka dib marka lagu hayo heerkulkan muddo cayiman, waxaa lagu qaboojiyaa xawaare kala duwan.
1. Dhismaha birta
Birta: Walaxda madmadow, dhalaal bir ah, kuleyl wanaagsan iyo korantada, iyo korantada korantada ayaa hoos u dhacda marka ay sii kordheyso heerkulka, waxayna qani ku tahay ductility iyo malleability. A adag (ie, crystal) kaas oo atamka birta ku jira si joogto ah loo habeeyo.
Alloy: Walax leh astaamo macdan ah oo ka kooban laba ama in ka badan oo bir ah ama biro ah iyo kuwo aan bir ahayn.
Marxaladda: waa qayb ka mid ah daawaynta oo leh halabuur, qaab dhismeed iyo waxqabad isku mid ah.
Xalka adag: Karis adag oo bir ah oo atamka (isku-dhafka) hal (ama dhowr) walxood ay ku milmaan shabagga curiyaha kale iyadoo weli la ilaalinayo nooca shabagga ee curiyaha kale. Xalka adag wuxuu u qaybsan yahay xal adag oo dhexdhexaad ah iyo beddelaad laba nooc oo xal adag ah.
Xoojinta Xalka Adag: Marka ay atomyada solute-ga ahi galaan daldaloolada ama qanjidhada shabagga kristal ee dareeraha ah, shabagga crystal ayaa qalloocan oo adkaanta iyo xoogga xalka adag ayaa kordha. Dhacdadan waxaa lagu magacaabaa xoojinta xalalka adag.
Isku-dhafka: Isku-darka kiimikaad ee ka dhexeeya qaybaha daawaha waxay soo saartaa qaab-dhismeed adag oo crystal ah oo leh sifooyin macdan ah.
Isku darka makaanikada: Halabuurka daawaha oo ka kooban laba qaab-dhismeedka crystal. Inkasta oo ay tahay crystal laba-gees ah, waa qayb waxayna leedahay sifooyin farsamo oo madax-bannaan.
Ferrite: Xalka adag ee dhex-dhexaadka ah ee kaarboonka ee a-Fe (birta leh qaab-dhismeed cubic ah oo jidhka ku salaysan).
Austenite: Xalka adag ee dhex-dhexaadka ah ee kaarboonka ee g-Fe (qaab dhismeedka cubic bir ah oo wajiga ku wajahan).
Cementite: xarun deggan (Fe3c) oo ay sameeyeen kaarboon iyo bir.
Pearlite: isku dhafka farsamada oo ka kooban ferrite iyo cementite (F+Fe3c waxa ku jira 0.8% kaarboon)
Leeburite: isku dhafka farsamada oo ka kooban sibidh iyo austenite (4.3% kaarboon)
Daaweynta kuleylka birta waa mid ka mid ah hababka muhiimka ah ee wax soo saarka farsamada. Marka la barbar dhigo hababka kale ee processing, daaweynta kulaylku guud ahaan ma beddelo qaabka iyo guud ahaan ka kooban kiimikada workpiece ah, laakiin by beddelo microstructure gudaha workpiece ah, ama beddelo ka kooban kiimikada ee dusha workpiece ah , Si aad u bixiso ama hagaajinta waxqabadka ee workpiece ah. Dabeecaddeedu waa in la hagaajiyo tayada gudaha ee workpiece, taas oo aan guud ahaan muuqan indhaha qaawan.
Si loo sameeyo birta birta ah waxay leedahay sifooyinka farsamada ee loo baahan yahay, guryaha jireed iyo kiimikada kiimikada, marka lagu daro xulashada macquulka ah ee alaabta iyo hababka kala duwan ee sameynta, hababka daaweynta kulaylka ayaa inta badan lama huraan ah. Birtu waa sheyga ugu badan ee loo isticmaalo warshadaha mishiinada. Qaab-dhismeedka yar-yar ee birta waa mid adag waxaana lagu xakameyn karaa daaweynta kulaylka. Sidaa darteed, daaweynta kulaylka ee birta ayaa ah nuxurka ugu muhiimsan ee daaweynta kulaylka birta. Intaa waxaa dheer, aluminium, copper, magnesium, titanium, iwm. iyo Alloys-kooda sidoo kale waxaa lagu daweyn karaa kulayl si loo beddelo qalabkooda makaanikada, jirka iyo kiimikada si ay u helaan waxqabadyo kala duwan.
Waxqabadka qalabka biraha guud ahaan waxaa loo qaybiyaa laba qaybood: waxqabadka habka iyo waxqabadka isticmaalka. Waxqabadka habka loogu yeero waxaa loola jeedaa waxqabadka qalabka biraha ee hoos yimaada xaaladaha qaboojinta iyo kululaynta ee habraaca iyo habka wax soo saarka ee qaybaha farsamada. Waxqabadka geeddi-socodka qalabka biraha ayaa go'aaminaya la qabsiga habka wax soo saarka. Sababo la xiriira xaaladaha processing kala duwan, waxqabadka habka loo baahan yahay sidoo kale waa ka duwan yahay, sida waxqabadka tuurista, weldability, been abuur ah, waxqabadka daaweynta kulaylka, machinability, iwm. ee qaybaha farsamada, oo ay ku jiraan sifooyinka farsamada, sifooyinka jirka, sifooyinka kiimikada, iwm. Waxqabadka walxaha birta ayaa go'aaminaya kala duwanaanshaha isticmaalka iyo nolosha adeegga.
Warshadaha wax soo saarka mishiinada, qaybaha farsamada guud ayaa loo isticmaalaa heerkulka caadiga ah, cadaadiska caadiga ah iyo warbaahinta aan si adag u dhicin, qayb kasta oo makaanikduna waxay qaadi doontaa culeysyo kala duwan inta lagu jiro isticmaalka. Waxqabadka walxaha birta ah si looga hortago burburka culeyska waxaa lagu magacaabaa sifooyinka farsamada (ama qalabka farsamada).
Qalabka farsamada ee qalabka birta ah ayaa ah saldhigga ugu weyn ee naqshadeynta iyo xulashada walxaha qaybaha. Dabeecadda culeyska la dabaqay waa ka duwan yahay (sida xiisadda, isku-buufinta, qulqulka, saameynta, culeyska wareegga, iwm.), iyo sifooyinka farsamada ee loo baahan yahay ee walxaha birta ah ayaa sidoo kale ka duwanaan doona. Qalabka farsamada ee sida caadiga ah loo isticmaalo waxaa ka mid ah: xoogga, caagagga, qallafsanaanta, adkaanta saameynta, iska caabbinta saameynta badan iyo xadka daalka.
Waqtiga boostada: Agoosto-24-2021